भूकम्पको एक वर्ष : के भयो के भयन ? - Deshko News Deshko News भूकम्पको एक वर्ष : के भयो के भयन ? - Deshko News
भूकम्पको एक वर्ष : के भयो के भयन ?
काठमाडौँ, वैशाख ११
नेपालमा भूकम्प गएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको त्रास नेपालीको मनबाट हट्न सकेको छैन । परकम्प जाने क्रम पनि रोकिएको छैन । भूकम्पले दिएको पीडा कसैले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यसो त, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको ११ औँ स्थानमा पर्दछ । नेपालको भौगर्भिक अवस्था निकै कमजोर मानिन्छ । दैनिक स–साना भूकम्प गइरहनुले पनि नेपालको भौगर्भिक अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
भूकम्प कहिले आउँछ ? कहाँ आउँछ ? भनेर पत्ता लगाउने यन्त्रको अहिलेसम्म विकास हुनसकेको छैन । तर भूकम्पीय जोखिमयुक्त देश भनेर पहिचान भइसकेपछि सधैँ सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । “भूकम्प आफै खतरा हुदैन, तर एकवर्ष भयो भनेर बिर्सिदै जाने गर्नुहुँदैन, संरचना निर्माण गर्दा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ”–श्रेष्ठको भनाइ छ ।